Maxaa ka jira in safar qarsoodi ah madaxweynaha Ugandha Muqdisho ku tagey – SBC
Maxaa ka jira in safar qarsoodi ah madaxweynaha Ugandha Muqdisho ku tagey
Posted by editor on June 17, 2011 Comments
Madaxweynaha wadanka Ugandha Yoweri Museveni ayaa la sheegay in socdaal qarsoodi ah uu ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, sida uu daabacay wargeyska The Observer ee ka soo baxa magaalada Kampala.
Wargeyska ayaa sheegay in safarka madaxweynaha oo ahaa mid aan shaaca laga qaadin uu ku yimid Muqdisho, isagoo uga sii gudbvay wadanka Koonfur Afrika.~
Ilo wargal ah oo ka tirsan madaxtooyada Ugandha ayaa u sheegay wargeyska in sababta Madaxweyne Musaveni oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ugandha uu tagay Muqdisho ay tahay si uu niyada ugu dhiso ciidamadiisa ku sugan Muqdisho, kuwaasi oo dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen xoogaga Al-Shabaab ay kaga dhinteen 13 askari oo mid ka mid uu ahaa taliye sare oo darajadiisu aheyd Gaashaanle sare sida uu qorey wargeysku.
isagoo xiligaasi ku sii jeeday wadanka Koonfur Afri secretly visited Somalia on his way to South Africa last weekend, The Observer has established.
Afhayeenka ciidamada Ugandha Lt Col Felix Kulayigye, ayaa isagu sheegay inaanu ogeyn in madaxweyne Museveni uu booqdey Soomaaliya.
“Wuxuu dhawaan la kulmay madaxweynaha Soomaaliya, marka maxay tahay sababta uu u aadayo Soomaaliya” ayuu is waydiiyey Kulayigye oo ay soo xigetey jariidada The Observer.
Wargeyska The Observer wuxuu qorey in ilo wareed oo la isku haleyn karo oo dhanka military-ga ay u xaqiijiyeenin tiro askar oo ku dhaawacmay dagaaladii ugu dambeeyey ay u dhinteen dhaawacyadaasi.
Dhimashadan ayaa wargeysku sheegay inay ka dhigayso 13, kuwaasi oo ka mid yahay Lt Col Patrick Sibihwa.
Warka ayaa wuxuu intaasi ku darayaa in madaxweyne Musaveni uu go’aansadey in isbadal lagu sameeyo hogaanka ciidamada UPDF ee qaybta ka ah ASMISOm, taasi oo keentey in la badalo Maj Gen Nathan Mugisha oo ahaa taliyaha ciidamada Ugandha ee Muqdisho ku sugan laguna badalo Fred Mugisha.
Si kastaba ha ahaatee wargeysku wuxuu ku macneeyey safarka madaxweynaha Ugandha ee magaalada Muqdisho talaabo niyada loogu dhisayo ciidamada Ugandha ee qayb ka ah ciidamada AMISOM, kuwaasi oo dagaaladii ugu cuslaa dhawaan kala kulmay degmada Boondheere oo ay ka dhaceen dagaalo si xun loogu riiqmay.
Safar Madaxweynaha Ugandha Museveni uu ku tagey magaalada Muqdisho bishii November ee sanadkii 2010-kii waxaa la shaaciyey safarkaasi markii uu madaxweynuhu dib ugu laabtey Kampala, intii ka horeysanaya shaaca lagama qaadin.